दक्षिण कोरियाली महिलाहरुले किन छोटो कपाल राख्ने अभियानै चलाउनुपर्यो? कारण जान्दा दुनियाँ च’कित – Eps Sathi
August 10, 2021 747
दक्षिण कोरियाली धनुकाण खेलाडी आन सानले तीन ओलिम्पिक्स स्वर्ण पदक जित्दा उनले प्रशंसा मात्रै पाइनन्, आ’लोचना पनि खेपिन किनभने उनले छोटो पारेर कपाल काटेकी थिइन्। उनलाई लक्षित अ’पमानजनक शब्दमध्ये एक ‘नारीवादी आन’ भन्ने थियो। कोरियाली भाषामा नारीवादी शब्दले पुरुषलाई घृ’णा गर्ने भन्ने खालको नका’रात्मक अर्थ राख्छ।
एक पुरुषले एउटा पोस्टमा लेखेका छन्: “उनले स्वर्ण जितेको कुरा राम्रो हो तर उनको छोटो कपालले उनलाई नारीवा’दी जस्तो देखाउँछ। यदि त्यस्तो हो भने म मेरो समर्थन फिर्ता लिन्छु। सबै नारीवादी म’र्नुपर्छ।” उनलाई आ’लोचना गर्ने बढ्दै गएपछि उनले एउटा अभियान सुरु गरिन्। देशभरिका हजारौँ महिलाहरूले आफ्नो छोटो कपाल भएको तस्बिर सामाजिक स’ञ्जालमा राख्दै यसले आफूलाई अन्य महिलाभन्दा कम नबनाउने कुरा लेखे। दक्षिण कोरियाका महिलाहरूले लामो समयदेखि विभे’द र दुरा’चार भोगिरहेका छन् तर गएको दशकमा उनीहरूले मीटू अ’भियान र ग’र्भपत’न प्र’तिबन्ध खुलाएर केही अगाडि बढेका छन्।
त्यसो भए यो नयाँ अभियानले थप परिवर्तन ल्याउँछ त?
‘यसले मलाई अरू महिलाभन्दा फरक बनाउँदैन’ हान जियोङ ट्विटरमा सुरु भएको छोटो कपाल अभिया’नको केन्द्रमा छिन्। उनले #women_shortcut_campaign ह्याशट्याग सुरु गरेकी हुन्। उनले बीबीसीलाई सबै पुरुषप्रधा’न सामाजिक सञ्जालमा आनप्रति ल’क्षित एक वा दुई नभई धेरै नै दु’राचारी प्रतिक्रिया देख्दा आफूलाई दुः’ख लागेको बताइन्। उनका अनुसार त्यस्ता प्रतिक्रिया लेख्नेहरू धेरै युवकहरू भए पनि केही पाको उमेरका पुरुष र अझ केही महिला पनि छन्।
“यो खालको आ’क्रम’णले पुरुषले महिलाको शरी’रलाई नि’यन्त्रण गर्न सक्ने र महिलाले नारीवादी परिचय लु’काउनु पर्ने सन्देश दिन्छ,” उनले भनिन्। “महिलाहरूले छो’टो कपाल देखाउने अ’भियान सुरु गरेर ओलिम्पिक्स खेलाडी महिलासँग ऐक्यबद्धता जनाउँदा त्यो प्रवृत्तिवि’रुद्धको अभियान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो।” अभि’यानमा दशौँ हजार तस्बिर आउन थालेका छन् र धेरै महिलाले कपाल का’ट्नुअघि र का’टेपछिका तस्बिरहरू राखेका छन्।
केहीले आन सानको कपालले आफूलाई कपाल का’ट्न प्रोत्साहित गरेको बताएका छन्। तर किन कोरियामा छोटो कपाल नारीवा’दी हुनुसँग जोडिन्छ?
दक्षिण कोरियामा मीटू अभियानबारे प्रकाशोन्मुख पुस्तकका लेखिका हओन जङले यसलाई सन् २०१८ को अभियानसँग जोडेर हेर्छिन्। त्यो बेला सौ’न्दर्यको परिभाषाविरुद्ध धेरै महिलाहरूले कपाल का’ट्ने र मेकअप नगर्ने अभियान चलाएका थिए। “त्यसपछि छो’टो कपाल धेरै युवा नारीवा’दीहरूका लागि राजनीतिक अभिव्य’क्ति बनेको हो,” उनले भनिन्। “यो अभियानले महिलाहरू चाहिनेभन्दा अगाडि बढेको ठान्ने धेरै पुरुषहरूको आ’लोचना खे’प्यो।”
वि’वादा’स्पद औँलाको अभिव्यक्ति
यो अभियान नारीवादी लक्षित अर्को आ’क्रामक अ’भियानको केही सातापछि बाहिर आएको छ। केही समाएको जस्तो गरी बुढीऔँला र चोरऔँलाको सङ्के’तलाई केही पुरुषले उनीहरूको लि’ङ्गको सानो आकार समाए जस्तो गरेर बे’इ’ज्जत गर्न खोजेको दा’बी गरेका छन्।
सो सङ्केत अहिले निष्क्रिय बनेको अतिवादी नारी समूह मेगालियाको परिचयात्मक चित्र थियो र सो समूहलाई पुरुषलाई घृ’णा गर्ने समूह मानिन्छ। त्यो चित्रलाई ब’हिष्का’र गर्ने अ’भियान चलेपछि केही ठूला ब्रान्डहरूले यस्तै खालको चित्र प्रयोग गरिएका विज्ञापनहरू हटाएका थिए।
ती कम्पनीहरूले राजनीतिक अ’भिव्यक्ति दिन नचाहे पनि केही पुरुषहरूले उस्तै देखिने चित्रहरू खोजेर आ’लोचना गर्न थालेपछि उनीहरू ती विज्ञापन हटा’उन बा’ध्य भएका थिए र कतिपय अवस्थामा क्ष’माया’चना गरेका थिए।
तर विज्ञहरूले यस्तो कार्यले ती पुरुषहरू अझ उत्साहित बनेको र आन सानलाई लक्ष्य बनाएको बताउँछन्।
“उनीहरूले आन सानको रूपमा नयाँ लक्ष्य भेटे,” जङले भनिन्। “उनी युवा खेलाडी थिइन्, छोटो कपाल थियो, महिला कलेज पढेकी थिइन् अनि त्यसैले ती पुरुषहरूलाई मन नपर्ने धेरै कुराको प्रतिनिधित्व गर्थिन्।”
अनलाइनमा युवा पुरुषको रि’सको कारण महिलाहरूको सफलताका कारण उनीहरूले मौका नपाएको भन्ने सोचका कारण आउँछ।
“पुरुष प्रधान अनलाइन समुदायमा युवा पुरुषलाई उनीहरू पछाडि पर्नुको कारण महिला रहेको बताइन्छ। उदाहरणका लागि महिलाहरूले परीक्षामा राम्रो गरेर पुरुषको सीट चोरेको बताइन्छ,” हानले भनिन्।
दक्षिण कोरियामा विश्वविद्यालयमा भर्ना र जागिरका लागि क’डा प्रतिस्प’र्धा हुने गर्छ र केही पुरुषहरू महिलाका कारण आफू अ’न्यायमा परेको ठान्छन्। उदाहरणका लागि सबै पुरुषहरू १८ महिना अनिवार्य सै’न्य तालिममा सहभागी हुनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरू महिलाभन्दा पछाडि पर्ने ठान्छन्।
कोरियामा एक दर्जनभन्दा बढी महिला विश्वविद्यालय छन् तर पुरुषहरूका लागि त्यस्ता विश्वविद्यालय छैन।
तर कोरियामा महिलाहरूको औसत तलब पुरुषको तुलनामा ६३ प्रतिशत मात्रै छ। यो विकसित मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो तलब खाडलमध्ये एक हो।
द इकोनोमिस्टले दक्षिण कोरियालाई विकसित राष्ट्रहरूमध्ये कामकाजी महिलाका लागि सबैभन्दा न’राम्रो देश मान्छ। त्यसो भए दक्षिण कोरियाली महिलाका लागि अगाडिको बाटो कस्तो छ त? अनि यस्ता अ’भियानले केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ त? “गएको दुई वर्षमा परिवर्तनहरू भएका छन्,” जङले भनिन्।
“महिलाहरू आफ्नो जीवनको नयाँ बाटो कोर्न प्रयास गर्न थालेका छन् र महिला जस्तो देखिनु पर्ने सामाजिक द’बाववि’रुद्ध जान थालेका छन्। उनीहरूले सहज लाग्ने कपाल का’ट्ने” स्वतन्त्रता खोज्नु यसको सानो अंश मात्रै हो।” बिबिसी नेपालीमा प्रकाशित सामाग्री
Prevआयो ड’रलाग्दो तथ्याङ्क, कोरियामा काम गर्दा दुर्घटनामा ज्या’न गु’माउने कोरियनभन्दा विदेशीको दर धेरै
Next१ सय २० बर्षअघि कोरियामा यसरी गुढ्थे गाडी, मान्छे जुत्ता चप्पल खोलेर पस्थे, बिजुली बत्ति हेर्दा पर्थे चकि’त
कोरियामा अब बच्चाहरुले आफ्नो आमाको थर राख्न पाउने
कोरियाकी युन एजङले जितिन बहुचर्चित ओष्कार अवार्ड